ရှညောသား: February 2011
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 27, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပုပ္ပားတောင်အကြောင်းရေးပြီးတော့ မြင်ကွင်းလေးတွေပါ ကြည့်ရှု့ခံစားနိုင်အောင် ပုပ္ပားတောင်အကြောင်း ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နားထောင်သွားပါအုံး ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့သီချင်းလေး တွေပါ...
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 25, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, February 23, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျောင်းဖွင့်ပြီး တစ်လလောက်ကတော့ စာရယ်လို့ ကောင်းကောင်းမသင်ပါဘူး။ကျောင်းသားမစုံ သေးတာကို အကြောင်းပြပြီး တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက် ၀င်ပြီးဆရာတွေက မိတ်ဆက်တာ လောက်ပဲ။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့။နောက်တော့လည်း နားလည်သွားပါတယ်။ ပါမောက္ခ ဆရာကြီး ဆရာကြီးတွေ အတန်းချိန် ၀င်သင်တော့ ပြောတာတွေကလည်း မြန်သလားမမေးနဲ့။ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြပြီးပြောသွားတာ ဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေက ဘာကို လိုက်ရေးရမှန်း မသိဘူး။တစ်ခါတစ်လေ စာရှင်းပြရင်းက သင်ပုန်းပေါ်မှာ ချရေးတာလေးကိုပဲ လိုက်မှတ်ရတာပေါ့။သူများတွေပြောတဲ့ လက်ချာလိုက်တာ ဆိုတာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ နားလည်မိတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆရာတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ၀င်သင်။ ရေးခိုင်းတော့ ရေးမှတ်လိုက်၊ ပြောပြတာကို နားထောင်လိုက်နဲ့ပဲ တက္ကသိုလ် စာသင်ကြားမှု့စနစ်ကို ရင်းနှီးလာပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်တာလဲ အနည်းငယ်ကြာလာတော့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေလည်း ရှိလာတယ်။ပေါင်းသမျှကလည်း ဘ၀တူ တောသားတွေကြည့်ပါပဲ။မြို့သားဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ မိတ္ထီလာသား တစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ ကျန်တာ တွေက အားလုံးတောသားတွေ များတယ်။ရွာမှာဗွီဒီယိုတွေ ကြည့်ရတုန်းကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ များမိန်းခလေးတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပျော်ပျော်ပါးပါး စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ တကယ်ကိုပျော်စရာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ကတော့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်မှ မပါဘူး။ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ မိန်းခလေးတွေနဲ့လည်း သိပ်ပြီး မရင်းနှီးကြသေးတာလည်း ပါတာပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့လည်း မေဂျာတူဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မောင်နှမတွေလို ခင်မင်သွားကြတော့ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ပထမနှစ်မှာ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲဆိုတာကို လုပ်ပေးတယ်။ ကျောင်းကိုဝင်လာတဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံးအတွက် လုပ်ပေးတာပါ။ပွဲရယ်လို့တော့ ထူးထူးခြားခြား မပါပါဘူး။ ပါမောက္ခချုပ် ကမိန့်ခွန်းပြောပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးက ပါမောက္ခဆရာကြီး ဆရာမကြီးများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ကျောင်းကို ၀င်ရောက်လာကြလို့ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ကျောင်းစည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပြောကြာတာလောက်ပါပဲ။ နောက်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် မေဂျာဝဲလ်ကမ်း ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။မေဂျာဝဲလ်ကမ်း မှာတော့ ဌာနတခုချင်းစီ ပြုလုပ်တာဆိုတော့ ဌာနတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူရလေအောင် အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ကြပါတယ်။အစားအသောက်ကတော့ ဒံပေါက်နဲ့အအေး ကျွေးပါတယ်။ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့ကတော့ သီချင်းဆို ၀ါသနာပါသူကသီချင်းဆို၊ အက၀ါသနာပါသူက အက၊ တေးသရုပ်ဖော်၊ ဟာသ စတဲ့အစီအစဉ် လေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး တင်ဆက်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုက တက္ကသိုလ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ကွင်း(Queen) ကင်း(King) ဆိုတာကို မေဂျာဝဲလ်ကမ်းမှာပဲ ရွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မေဂျာကတော့ ပွဲမကျင်းပခင် ကတည်းက ရုပ်ရည်အသင့်တင့် ရှိသူ ယောကျာ်းလေးဆယ်ယောက် မိန်းခလေးဆယ်ယောက်စီ ဆရာမတွေက ဦးဆောင်ပြီးရွေးပါတယ်။ ၀ဲလ်ကမ်းနေ့မှာ အဲ့ဒီအရောက် နှစ်ဆယ်ကို ရှေ့ထွက်ခိုင်းပြီးတော့ ပရိတ်သတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ဆိုတာကလည်း မေဂျာတူ မောင်နှမတွေပါပဲ။ အတန်းကြီးတဲ့ အစ်ကိုအစ်မတွေ ပေါ့။အားလုံးတစ်ယောက်ချင်းစီ မိတ်ဆက်ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်ကနေ မဲပေးပြီးတော့ မဲများဆုံးလူကိုရွေးချယ်ပါတယ်။မှတ်မိပါသေးတယ် ဆရာမတွေ လက်ရွေးစင်ဆယ်ယောက်စီ လာရွေးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်တဲ့သူက ခေါင်းတွေမော့ထားပါ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတဲ့ သူတွေကတော့ ခေါင်းငုံ့ထားဆိုပြီး ဆရာမတွေက ရယ်စရာပြောပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ တောသားအဖွဲ့ ခေါင်းတွေငုံ့နေလိုက်ကြတာ ခုံအောက်ကို ၀င်တောမတတ်ပါဘဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်က မေဂျာကွင်းကို မလှိုင်နားက ရုန်းစင်ကြီးသူ ရသွားပါတယ်။ ကင်းကိုတော့ မိတ္ထီလာသားက ရသွားပါတယ်။ ကင်းက ကျွန်တော်တို့မေဂျာ ယောကျာ်းလေးတွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက တော့ ဘာမှမဟုတ်ခဲ့သလိုနဲ့ အခုအချိန်မှာ ပြန်ပြီးတွေးကြည့်တော့ တကယ်လွမ်းမောဖွယ်ရာ တက္ကသိုလ်နေ့ ရက်လေးတွေပါပဲဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မေဂျာဝဲလ်ကမ်းမှာ နှစ်စဉ်ပါတဲ့ အစီအစဉ်တခုက ဓာတုကလျာ ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်အသင့်တင့်ရှိတဲ့ ကျောင်းသူတွေကို ရွေးပြီးတော့ ဆရာမဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်သူကျောင်းသားတွေက မဲပေးပြီးရွေးချယ်ပါတယ်။ ကိုအံ့ကြီးရဲ့ ယဉ်တစ်ကိုယ်မယ် သီချင်းနဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြ လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ အကောင်းဆုံးတစ်ယောက်ကို ရွေးပြီး ဓာတုကလျာစာတမ်းပါ စလွယ်နဲ့သရဖူ ချီးမြှင့်ပါတယ်။ ကွင်းနဲ့ဓာတုကလျာက တစ်ယောက်ထဲတော့ ရတဲ့နှစ်မရှိပါဘူး။ ဓာတုကလျာမှာက ကိုယ်ဟန်ပြလမ်းလျှောက် မှု့ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျော်ဖြေမှု့အပိုင်းမှာတော့ သင်္ကြန်အက၊ တေးသရုပ်ဖော်၊ တစ်ပင်တိုင်အက စသည့်ဖြင့် ဖျော်ဖြေကြပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ ခေါင်းငုံနေခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တောသားတွေလည်း ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ် မေဂျာဝဲလ်ကမ်းတွေမှာ သီချင်းလည်းတက်ဆိုပါတယ်။ တေးသရုပ်ဖော်မှာလည်းဝင်ပါတယ်။ မီပုံပွဲကတဲ့ အထဲမှာလည်း မလွတ်ရပါဘူး။ တောသားလည်း မြိုပါးဝ သွားပြီပေါ့ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 20, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 18, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့တပိုတွဲလပြည့်နေ ဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ထမနှဲထိုးပွဲတွေ ကျင်းပနေကြမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လို အဝေးရောက်မြန်မာတွေ အတွက်တော့ အလွမ်းပြေ ထမနှဲလုပ်စား ဖို့ဆိုတာက သိပ်ပြီးမလွယ်လှဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ နေရာက အာရှအစားအစာ သိပ်ဝယ်လို့မလွယ်တော့ ထမနှဲဆိုတာလည်း လုပ်စားဖို့ခက်တာပေါ့ဗျာ။ ဗီယက်နမ်ဈေး ရောက်တုန်းက ရှားရှားပါးပါး ကောက်ညှင်းဆန် ထုပ်လေးတွေ့လို့ တစ်ထုပ်ဝယ်လာခဲ့တာ လေးကိုသတိရတာနဲ့ ပြန်ကြည့်တော့ ကောက်ညှင်းဆန်ထုပ်က ဒီအတိုင်းရှိနေသေးတယ်။ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲ ရွာမှာတုန်းက စာခဲ့ရတဲ့ ထမင်းနှဲလုပ်စားဖို့ အကောင်အထည် ဖော်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။မီးဖိုအခက်အခဲကြောင့် မြန်မာပြည်မှာလိုတော့ အသေးစိတ် မလုပ်တော့ဘူး။ အခန်းက ထမင်းပေါင်းအိုးမှာပဲ ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေအနေတော် ထည့်ပြီးတော့ ချက်လိုက်တယ်။ ထမင်းအိုးတည်ထားတုန်း မြေပဲဆံရှိတာလေးကို မီးဖိုမှာ သွားလှော်တယ်။ မြေပဲလှော်ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထားတာလေးကို နနွင်းမှုန့်လေးများများ ထည့်ပြီး ဆီချက်ချက်လိုက်တယ်။ အခန်းပြန်ရောက်တော့ ထမင်းအိုးက အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ထမင်းချွေးသိပ်အောင် ခဏထားလိုက်တယ်။ မြေပဲလှော်ကို အခွံတွေ ချွတ်ပြီးတော့ မညက်တညက်လေး ထောင်းထားတယ်။ အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တော့ ထမင်းကို ပေါင်းအိုးအလွတ်ထဲကို ခူးပြီးဆားဖြူး ဆီချက်ဆမ်းပြီးတော့ သမအောင်မွှေပေးပါတယ်။ ထမင်းမွှေလို့ သမလောက်တော့ မြေပဲဆံထောင်းထားတာကို ထည့်ပြီးထပ်မွှေ ပါတယ်။အရသာအနေအထား မြည်းကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ မြေပဲလှော်နံ့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ ထမနှဲရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ရွာမှာလည်း ထမနှဲဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲ စားခဲ့ရပါတယ်။ အုန်းသီး၊နှမ်း စတဲ့အဆာပလာ တွေပါတာကိုတော့ ကျွန်တော် မြို့ရောက်မှစားဖူးတာပါ။အခုကျွန်တော် လုပ်ထားတာ လေးကတော့ အဆာပလာမစုံ ပေမဲ့ မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ တပိုတွဲ လပြည့်နေမှာ လုပ်စားဖြစ်တာလေးပါ။ အားလုံးပဲ သုံးဆောင်သွားကြပါအုံး...ထမနှဲက ထည့်တာများသွားလို့ ပန်းကန်နဲ့ ပြည့်သွားတယ်။ များများလေးဆိုတော့ အ၀စားရတာပေါ့...:)
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, February 16, 2011 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့တော့ လာလည်သူတွေကို ကျွန်တော်ချက်စားဖြစ်တဲ့ အညာဟင်းလေးတွေထဲက တို့ဟူးသုပ်လေးနဲ့ ဧည့်ခံပါမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အမေ့အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ လုပ်စားဖြစ်တဲ့အစားလေးတစ်မျိုးပါ။ အညာဒေသမှာတင်မဟုတ်ဘဲ ဒေသအတော်များများမှာ စားကြပါတယ်။တချို့ဒေသမှာတော့ တို့ဟူးကို(ချဉ်စော်ကား)လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ နေရာကအာရှအစားအစာ ၀ယ်လို့အရမ်းခက်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဆိုင်လေးတွေရှိလို့ တချို့အစားအစာလေးတွေတော့ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
ပဲမှုန့်ကတော့ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနေ ၀ယ်လို့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆီက ပဲမှုန့်လောက်တော့ မစစ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ တို့ဟူးလုပ်စားလို့တော့ ဖြစ်ပါတယ်။တို့ဟူးကျိုတာကတော့ အရမ်းမခက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကျိုတာကတော့ ပဲမှုန့်တစ်ဆရေနှစ်ဆ ထည့်တယ်။ပဲမှုန့်နို့ဆီတစ်ဗူးဆိုရင် ရေကနှစ်ဗူးထည့်တယ်။ ဒီကပဲမှုန့်ကတော့ အသင့်ပါပဲ။ လက်မောင်းတုတ် ချင်ရင်တော့ ရေများများထည့်ပြီးကျိုပေါ့ဗျာ။ ပဲမှုန့်ကိုအရင်ဆုံးရေလေး နဲနဲလောင်းထည့်ပြီး ပျစ်သွားအောင်နယ် ပဲမှုန့်အတုံးအခဲလေးတွေ မကျန်အောင်ဂရုစိုက် ချေပေးပြီးတော့ အရောင်လေးလှအောင် ဆနွင်း(နနွင်း)မှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ မီဖိုပေါ်မှာတင်ပြီးကျိုယုံပါပဲ။မီဖိုပေါ်အိုးရောက်ကတည်းက ဖြည်းဖြည်းချင်းမွှေပေးနေပါ။တဖြည်းဖြည်း ပျစ်လာတဲ့အခါ အားထည့်ပြီးမွှေပေးပါ။တို့ဟူးကျိုနေရင်း ယောက်မကို အနည်းငယ်မြှောက်ကြည့်ပေးပါ။ အဲ့ဒီလိုမြှောက်ကြည့်လို့ တို့ဟူးကအမျှင်တန်းနေသေးရင် ဆက်ပြီးကျိုပါအုံး။နောက်တစ်ခါမြှောက်ကြည့်လို့ တို့ဟူးက အမျှင်မတန်းတော့ဘဲ ချက်ချင်းပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင် ခဏလောက်ထပ်မွှေပေးပြီး အအေးခံမယ့် ဗန်းထဲကိုသွန်ထည့်ပြီး အအေးခံထားလိုက်ပါ။တို့ဟူးသုပ်ဖို့အတွက် ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းပြီးဆီချက်ချက်ပါတယ်။တချို့ကတော့ ကြက်သွန်နီလည်းထည့်ပြီးသတ်ပါတယ်။မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်ကိုပဲ ထည့်ပါတယ်။အချဉ်အတွက် မန်ကျည်းမှည့်ကိုရေစိမ်ပြီး အနှစ်ရအောင်လုပ်ထားပါ။ဆီချက်ချက်ပြီးရင်း ဆီချက်ကိုပန်းကန်တစ်ချပ်နဲ့ ထည့်ထားပြီး ဆီချက်တဲ့ဒယ်အိုးထဲကို မန်ကျည်းမှည့်အနှစ်လေးလောင်းထည့်ပြီး ပွက်အောင်ထားပေးပါ။ မကျိုချင်လို့ဒီအတိုင်းထည့်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ငံပြာရည်ကိုလည်းထိုးနည်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ တို့ဟူးသုပ်ရောင်းတဲ့သူက မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို အတောင့်လိုက်လေး အိုးထဲမှာထည့်ပြီးရေစိမ်ထားပါတယ်။ ငံပြာရည်ကိုတော့ ကျိုပြီးတော့ပုလင်းနဲ့ထည့်ထားပါတယ်။ ၀ယ်သူလာရင် တို့ဟူးလေးထည့် မန်ကျည်းမှည့်ရည်၊ငံပြာရည်လေးအရင်လောင်းပြီးမှ ဆီချက်ကိုဝှေ့ဆမ်းပြီးတော့ ဇွန်ဖင်လေးနဲ့ပွတ်လိုက်ပါတယ်။ဆီဈေးကြီးတော့ ဆီကိုအများကြီးမထည့်ပါဘူး။ အထက်ကပြောတာလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ နံနံပင်အနည်းငယ်ကိုလှီးထားပါ၊ငရုတ်သီးတောင့်ကို ဆီနဲ့အနည်းငယ်ကြော်ပြီးထောင်းထားပါ။တို့ဟူးကိုလည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို အရွယ်အစားလေးတွေ လှီးပြီးတော့ ပန်းကန်ထဲမှာထည့်၊ ဆီချက်၊ငံပြာရည်၊မန်ကျည်းမှည့်၊ဟင်းချိုမှုန့်၊နံနံပင်စတာလေးတွေထည့်ပြီး နယ်ပေးပါ။ ငရုတ်သီးကတော့ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ထည့်ပြီးတော့စားပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ငရုတ်သီးမပါရင် ထမင်းကိုမစားတတ်အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ငရုတ်သီးကိုပါ တစ်ခါထဲထည့်ပြီးတော့ သုပ်ပါတယ်။ တို့ဟူးသုပ်ပြီးရင်တော့ ရေနွေးသောက်ရင်းအမြည်းဖြစ်စေ၊ထမင်းနဲ့ဖြစ်စေတွဲဖက်ပြီးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နံနက်စောစောမှာ ထမင်းပူပူလေးနဲ့တို့ဟူးသုပ်တွဲဖက်ပြီးစားရတာကို သဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော့်လက်ရာ တို့ဟူးသုပ်လေးသုံးဆောင်သွားပါအုံးဗျာ...
အ၀စားသွားပါဗျာ အားမနာပါနဲ့။ရေနွေးကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မေ့သွားတယ်။ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေးစားပြီး ရေနွေးပူပူလေးသောက်ရတာလည်း အခုရောက်နေတဲ့ နေရာရဲ့ရာသီဥတုနဲ့က အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
နောက်လည်း ကျွန်တော်ချက်စားဖြစ်တဲ့အညာဟင်းလေးတွေကို ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပ့ါမယ်ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, February 14, 2011 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နောက်ထပ်အကြောင်းလေးတခုကလည်း ရယ်စရာလေးအဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ ကျွန်တော်ကို အမေက ပဲဟင်းချက်ထားခိုင်းတယ်။အမေပဲဟင်းချက်ရင် ပဲကိုအရင်ပြုတ်ပြီးချက်တတ်သလို၊ပဲခြမ်းကိုရေဆေးပြီး ကြက်သွန်နီ၊ဆီ၊ဆား၊ငါးပိ၊ဆနွင်း စတဲ့ဟင်းခတ်လေးတွေတစ်ခါထဲ ထည့်ပြီး ရေလေးနည်းနည်းနဲ့ အရင်လုံးတယ်။ပြီးမှ ရေများများထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာပဲနူးသည်အထိ တည်ထားတတ်တယ်။ စားခါနီးမှ ခွေးတောက်ရွက်၊ဆူးပုတ်ရွက် စတဲ့အရွက်လေးများ ခတ်ပြီးတော့ မီးဖိုပေါ်ကချပြီးစားတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဧည့်သည်လာရင်ချက်တဲ့နည်းပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကုလားပဲက ကိုယ့်ယာခင်းထွက်တာဆိုတော့ ပဲဟင်းကို ကုလားပဲနဲ့ ချက်တာများတယ်။ ပဲကြီးဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ပဲကြီးကလည်း ဟင်းချိုချက်ရင် စားလို့သိပ်ကောင်းတယ်ဗျ။အိမ်မှာဧည့်သည်လာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ယာခင်းကိုပျော်ပွဲစား ၀ိုင်းပြီးထွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ အမေက ပဲကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ အိုးထဲမှာအေးအောင်ထားတယ်။ ပဲပြုတ်ထားတာ အေးသွားတော့မှ အရည်ကိုစစ်ယူပြီး ဟင်းအိုထဲမှ ပဲပြုတ်ပြီးသားကို သစ်သားငရုတ်ကျည့်ပွေ့နဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးထောင်းပေးတယ်။ ပြီးမှ ပန်းကန်ထဲပြောင်းထည့်ပြီး အဲ့ဒီဟင်းအိုးနဲ့ပဲ ကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ်ပြီးတော့ ပဲပြန်ထည့်ပြီး ချက်တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီသတ်ပြီးချက်ထားတော့ ပဲဟင်းက မွှေးပြီးတော့ စားလို့တစ်မျိုးကောင်းတာပေ့ါဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အမေချက်တာကို သေချာကြည့်ထားတော့ သူလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်တာပေါ့လေ။ အစပိုင်းတော့အဆင်ပြေနေတာပဲဗျ။ ပဲပြုတ်ပြီးသားကို သစ်သားငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ ထောင်းတော့မှ ပြဿနာတက်တော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာက ဟင်းချိုအိုးကို မြေနဲ့လုပ်တဲ့ဟင်းအိုး သုံးတာများတယ်။ ကျွန်တော်ပဲပြုတ်တာလည်း မြေဟင်းအိုးနဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒီအိုးထဲမှာ ပဲပြုတ်ပြီးသားကို အမေ့နည်းအတိုင်း ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ထောင်းတာမှာ ခပ်ဖွဖွမဟုတ်ဘဲ အားထည့်ထောင်းလိုက်တော့ ဟင်းအိုးက ဖင်ကနေအကွင်းလိုက် ထွက်သွားပါတော့တယ်ဗျာ။ အဲ့ဒီနေ့ကတော့ အိမ်ကလူတွေလည်း ဧည့်သည်ချက်ဟင်းချိုကို မစားလိုက်ရဘူး။ ပုံမှန်ချက်နေကြနည်းနဲ့ချက်တဲ့ ပဲဟင်းနဲ့ ထမင်းစားခဲ့ရတယ်။ အမေကတော့ ငါ့သားနောက်ဆို ပဲဟင်းချက်ရင် ပဲကိုဟင်းအိုးထဲမှာမထောင်းတော့နဲ့တဲ့။ ပဲကိုငရုတ်ဆုံမှာညက်နေအောင် ထောင်းပြီးချက်ပေါ့တဲ့။ဟင်းအိုးဖိုးမတတ်နိုင်တော့လို့နဲ့ ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ထမင်းချက်လာခဲ့တာ အခုအချိန်ထိဆိုပါတော့ဗျာ။ ချက်တာကြာတော့လည်း အရသာကောင်းအောင် စီမံပြီးချက်တတ်သွားတာပါပဲ။ကျွန်တော်က အစားအစာတခုကို အပြင်ဆိုင်မှာ ၀ယ်စားတယ်ဆိုရင် မစားခင်ဘယ်အရာတွေပါလဲ အရသာဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို သေချာမှတ်သားတတ်တယ်။ နောက်ကိုယ့်ဘာသာ စားချင်စိတ်ပေါက်ရင် စမ်းပြီးချက်စားတယ်။ မြို့ပေါ်ကအစားအစာ တော်တော်များများကို ကျွန်တော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ချက်တတ်ခဲ့တာပဲ။ တောဟင်းကတော့ မြို့ဟင်းလောက် ချက်ရတာမခက်ဘူးလေ။တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာတော့ အဆောင်ကချက်ပေးတဲ့ထမင်းကို ဆိုင်က၀ယ်လို့ရတဲ့ ဟင်းနဲ့ပဲ စားခဲ့တာများတယ်။ ကိုယ်တိုင်ချက်ဖို့ကျတော့ အဆင်မပြေတာရယ် ကျောင်းစာကလည်းတဖက်ရယ်ကြောင့် မချက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းပိတ်လို့ ရွာပြန်ရင်တော့ ကျွန်တော့်အဖေက ငါ့သားလက်ရာလေးမစားရတာကြာပြီ ကောင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးပါအုံးကွ ဆိုပြီးလိုလိုလားလားနဲ့ တောင်းဆိုတယ်ဗျ။ ကိုယ်ချက်တာလေးကို အဖေနဲ့အမေ အားပါးတရစားတာမြင်ရတော့လည်း စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, February 14, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျွန်တော်တို့အကြီးလေးယောက်ကတော့ ထမင်းဟင်းကို ကောင်းကောင်းချက်တတ်ခဲ့ကြတယ်။၀ါသနာရယ်လို့မဟုတ်ဘဲ ဘ၀ရဲ့အခြေအနေအရပေါ့ဗျာ။ အမေအားတဲ့အခါအမေချက်၊ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အိမ်မှာရှိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုတစ်တွေ တစ်လှည့်စီချက်နဲ့ မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကတော့ လက်ရာတစ်မျိုးစီနဲ့မရိုးရအောင်ပါပဲဗျာ။ လက်ရာအမျိုးမျိုးဆိုရာမှာလည်း အသားငါးကတော့ ဆယ်ခါ့တစ်ခါပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဒေသ အစားအစာလေးတွေကိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ချက်တာပေါ့။အဖေနဲ့အမေလည်း သားတွေရဲ့လက်ရာတစ်မျိုးစီနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေးက သိပ်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းခဲ့တယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်အဘအမေ့ရဲ့အဖေက အမေတို့ငယ်ငယ်ကတည်းက ယာတောမှာတဲနဲ့နေခဲ့တာ။ရွာထဲမှာအိမ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်မဆောက်နိုင်သေးတော့ အဘကသူ့အိမ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်။ အဘက တောထဲမှာနေပေမဲ့ ရွာမှာကသူ့ကို လူကြီးတစ်ယောက်လိုအားကိုးတယ်။ ရွာမှာအလှူအတန်းမှအစ သာရေးနာရေးအဆုံး အဘရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုသာ နာခံကြတယ်။ ပြီးတော့အဘက ရွားဦးကျောင်းကို နံနက်တိုင်းအာရုဏ်ဆွမ်းဝတ် လည်းတာဝန်ယူထားတယ်။သူကတောထဲမှာ နေပေမယ့် ညနေပိုင်းရောက်ရင် သားသမီးတွေက ဆွမ်းချက်ဖို့အလှည့်ကျ ရွာကိုပြန်အိပ်ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်း အဘအိမ်မှာနေတာဆိုတော့ ဆွမ်းချက်တာဝန်ကို အမေကပဲယူထားလိုက်တယ်။ အမေ့ညီမအငယ်ဆုံးက သူရွာပြန်လာတဲ့အခါ သူချက်တယ်။ ကျွန်တော့် အဖွားကတော့ တောထဲမှာပဲနေတာများတယ်။ ဆွမ်းဟင်းချက်ဖို့အတွက် တောထဲမှာရာသီအလိုက်ပေါ်တဲ့ အသီးအနှံလေးတွေ၊ှမျှစ်စိုလေးတွေ၊မှိုလေးတွေကိုတော့ လူကြုံနဲ့ထည့်ထည့်ပေးတတ်တယ်။တခါတလေလည်း သူကိုယ်တိုင်သားသမီး၊မြေးတွေဆီလာရင်း ယူလာတတ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ရွာဦးကျောင်းအတွက် အာရုဏ်ဆွမ်းကို နေစဉ့်ဆွမ်းဝတ် ခုနစ်အိမ်ခန့်က တာဝန်ယူပြီးချက်တယ်။ နေ့ဆွမ်းကိုတော့ အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ ငါးအိမ်စီ ခွဲထားပေးတယ်။ပို့တဲ့ဆွမ်းအပြင် တစ်ရွာလုံးကိုလည်း ဆွမ်းခံလှည့်တာနဲ့ဆိုတော့ ရွာဦးကျောင်းမှာ ဆွမ်း၊ကွမ်းက ကျောင်းရှိကိုရင်ကျောင်းသားသာမက ဧည့်သည်လေးငါးယောက်လာရင်တောင် လောက်ငှအောင်ကျွေးနိုင်တယ်။အာရုဏ်ဆွမ်းချက်ရတာဆိုတော့ မနက်လေးနာရီထိုးရင်အိပ်ယာမှ ထပြီးကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ချက်ကြတယ်။မိုးလင်းရင် ဆွမ်းဆိုင်းက အဆင်သင့်ပြင်ထားယုံပဲ၊ ကျောင်းကကိုရင်နဲ့ကျောင်းသားလေးတွေက လိုက်ပြီးယူတယ်။ညနေပိုင်းကျတော့ ပြန်ပြီးပို့ပေးတယ်။ ဆွမ်းဆိုင်းဆိုတာက ယခုလို ချိုင့်များနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မြေဖြင့်လုပ်တဲ့အိုးလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်။ ဆွမ်းချက်ဖို့ဆိုပြီး အိုးသည်တွေဆီမှာ မှာလို့ရတယ်။ ထမင်းအိုးဆိုလည်း ဆန်နို့ဆီဗူး တစ်ဗူးဆံ့လေးပေါ့။ဟင်းအိုးဆိုလည်း ဟင်းတစ်ခွက်စာ ချက်နိုင်တဲ့မြေအိုးလေးတွေနဲ့ ချက်ပြီး ကျက်တော့ ထမင်းအိုးကိုအောက်ကထား အပေါ်ကဟင်းအိုးလေးဆင့်ပြီး ၀ါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်းလေးထဲမှာ ထည့်ပြီး သယ်သွားယုံပါပဲ။အညာဒေသရဲ့မှတ်သားစရာဓလေ့လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
အာရုဏ်ဆွမ်းဝတ်ချက်တာကိုပါ အမေကတာဝန်ယူထားတော့ အနက်အစောထပြီး ဆွမ်းချက်တဲ့အကျင့်ပါ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ရခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်အများဆုံးထချက်ရတယ်။ အကိုကြီးက အဘတို့တဲကိုသွားပြီးနေတော့ သူကသိပ်ပြီးမချက်ရတော့ဘူး။အမေကတော့မနက်ဆိုအမြဲတမ်းလိုလို အစောထပြီးဆွမ်းချက်ပါတယ်။ သူနေမကောင်းတဲ့အခါလောက်သာ ကျွန်တော်ကိုနှိုးတယ်။ကျွန်တော်လေးတန်းအောင်လို့ ငါးတန်းကိုဆက်တက်တဲ့ ကျောင်းကသုံးမိုင်လောက်ဝေးတယ်။ရွာကနေထမင်းထုပ် ထုပ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းတက်တော့ ထမင်းချိုင့်အတွက်ပါ အမေက ဆွမ်းနဲ့တစ်ခါထဲ အစောထချက်တယ်။ ထမင်းချိုင့်မှာတော့ ဟင်းရယ်လို့အထူးမပါဘူးပေါ့။ လဘက်ပဲလှော်သုပ်လေး၊ငါးပိကောင်ကင်းလေ၊သရက်သီးထောင်းလေးဆိုသလို အဆင်ပြေရာလေးတွေ ထည့်ထည့်ပေးတယ်။ ကျောင်းဖွင့်တာလည်း ကြာလာတော့နောက်ပိုင်း အမေ့ကို အစောမထခိုင်းတော့ပဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အစောထပြီး ဆွမ်းအတွက်ရယ်၊ကျွန်တော့်ထမင်းချိုင့်ရယ်၊အိမ်သားတွေအတွက်ရယ်ပါ ပေါင်းပြီးတော့ ထမင်းအိုးတည်ရတယ်။ အမေလည်း ယာခင်းထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတာတော့ဆိုတော့ အိပ်တဲ့အချိန်လေးပဲ နားရတာလေ။ တစ်ခါတလေတော့ အဖေက ထပြီးချက်ပေးတယ်။ အမေပင်းပန်းတာကို တွေးပြီးတော့ ကျွန်တော်ထမင်းချိုင့်နဲ့ဆွမ်းဝတ်အတွက်ကိုပါ ကိုယ်တိုင်းပဲအစောထချက်တယ်။ ထမင်းချက်ရင်း မီးဖိုဘေးမှာ စာကြည့်တတ်ခဲ့တယ်။ လူတွေမှာ အကျင့်ဆိုတာ တကယ်တော့လုပ်ယူလို့မခက်လှပါဘူး။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 13, 2011 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 13, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 11, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, February 09, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ထန်းရည်ချို - ထန်းပင်တစ်ပင်အရွယ်ရောက်လာပြီး ထန်းနို့စထွက်သည့်အချိန်မှ စတင်၍ ထန်းရည်ချိုစတင်ရယူနိုင်သည်။ ထန်းတက်ဖို့ရာ အတွက် ထန်းပင်အပေါ်သို့ တက်ရလွယ်ကူစေရန် ထန်းပင် ပင်စည်နှင့်ကပ်နေသော ထန်းလက်များကို အောက်သို့ခွာချ ပေးရသည်။ မလိုအပ်သော ထန်းလက်အဖျားပိုင်းများကို ထန်းရွယ်နှင့်အတူ ခုတ်ချပေးရသည်။ ပင်စည်နှင့်ကပ်နေသော ထန်းပတ်ခွ ကိုတော့ ထန်းတက်သူခြေထောက်နင်းရန် ချန်ထားပေးရသည်။ထန်းပတ်ခွလေးများအောက်သို့ ခွာချထားမှသာလျှင် ထန်းတက်ရာ၌ လွယ်ကူစွာခြေထောက် တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထန်းလက်၊ထန်းရွက်၊ထန်းပတ်ခွ များကိုရှင်းပြီးသောအခါ ထန်းနို့လေးများကို အပေါ်ယံမှ အခွံကြမ်းများ ခွာပေးရသည်။ ထန်းနို့လေးများသည် ထန်းပင်မှထန်းရည်ချိုရရန် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထန်းနို့လေးများသည် လူ၏လက်ချောင်းလေးများနှင့် အလွန်တူသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘ၀က ထန်းနို့လေးများကို လက်အတု လုပ်ပြီးကစားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုထန်းနို့လေးများကို တခုချင်းစီ ကွဲမသွားစေရန် ထန်းဖူးရွက်အနုလေးများနှင့် စည်းထားပေးရသည်။ ထို ထန်းနိုများသည် ထန်းပင်တစ်ပင်လျှင်သုံးလေးငါးခု အထိထွက်သည်။ အကုန်လုံးကို ထားလို့လည်းရသည်။ ထန်းနို့ ငါးခုထဲမှ သုံးခုကိုသာ ထန်းရည်အတွက်အသုံးပြုပြီး ကျန်နှစ်ခုကို ဖယ်ခြားပစ်နိုင်သည်။ သန်းစွမ်းသော ထန်းနို့ကိုသာလျှင် ထန်းရည်ရရှိရန် အတွက်အသုံးများသည်။ ထန်းနို့လေးများ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ ထိပ်ပိုင်းမှ အနည်းငယ် ထန်းလှီးဓားဖြင့် လှီးဖြတ်ပေးရသည်။ နောက်နေ့မြူအိုး ဆွဲမည်ဆိုလျှင်လည်း မြူအိုးမဆွဲမှီ စည်းထားသော ထန်းနို့လေးများကို ထန်းလှီးဓားဖြင့် အနည်းငယ် လှီးပေးပြီး မြူအိုးဆွဲရပါသည်။ထန်းနို့များမှ စီးကျလာသော ထန်းရည်ချိုကို မြူအိုးဖြင့်ခံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နံနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ် ညနေပိုင်းတစ်ကြိမ် မြူအိုးကိုလဲပေးရပါသည်။ ရရှိလာသော ထန်းရည်ချိုကို မိမိနှစ်သက်ရာ ထန်းရည်လောင်းခြင်းဖြစ်စေ၊ထန်းလျက်ကျိုးခြင်းဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာလေးများသည် ထန်းပင်တစ်ပင်မှ ထန်းရည်ချိုရရှိရန်အတွက် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရပုံလေးများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ ထန်းပြင်သည် ဟုခေါ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်း နေ့စဉ်ထန်းလှီးပေးရသော အလုပ်ကို ထန်းတက်(ထန်းလှီး)သည်ဟုခေါ်ကြပါသည်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, February 07, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 06, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 05, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မင်္ဂလာပါဗျာ...စာဖတ်စာရေးတာဝါသနာပါလို့...ဒီဘလော့လေးကိုဖန်တီးထားခြင်းပါ... အညာမှာမွေး အညာမှာကြီးပြင်းခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ ပုပ္ပားတောင်ကြီး နဲ့သိပ်ပြီးမဝေးလှတဲ့ ရွာလေး တစ်ရွာကပါ။ ဘ၀ခရီးကြမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်။ဆင်းရဲမှု့ကို တွန်းလှန်ချင်စိတ်နဲ့ ဘ၀ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ စိုင်ကော်လို့ အမေ့အိမ်နဲ့ ဝေးရာအရပ်ကို ရောက်နေပါတယ်။စာရေးစာဖတ်၊ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၊သစ်ပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဖြတ်သန်းခဲ့ ရတဲ့ဘ၀ အကြောင်းလေးတွေနဲ့ အညာဒေသ အကြောင်းလေးတွေ မျှဝေချင်လို့ ဘလော့လေး ဖန်တီးထားတာပါ။ ရိုရိုးအေးအေး နေတတ်တယ်။ မဟုတ်မခံ စိတ်ရှိတယ်။ လူတိုင်းကို ခင်တတ်ပါတယ်။ အညာသားတွေက အသားမည်းပေမဲ့ စိတ်ထားဖြူပါတယ်ဗျ...ရောက်လာသူအားလုံးကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
အလည်ရောက်လာ သူတိုင်းကို အညာဒေသရဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေ၊ အညာဒေသ အစားအစာတွေ၊ အညာဒေသရဲ့ဟာသလေးတွေ အပြင်ကျွန်တော့် ဘ၀မှာကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဖွင့်ဟရေးသားထားတဲ့ ကဗျာမမှီ စာမပီ ရေးသားမှု့လေးတွေနဲ့ ဧည့်ခံပါ့မယ်ဗျာ...
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, February 03, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook